जानकी सिंह संगको कुराकानि | Interviews | MeroSurkhet.com - All about Surkhet, News, Events, Photo Gallery, Interview
BulbuleDeutibajaiGhantagharKakrebiharSurkhet District सुर्खेतमा विश्व बैंकको पाँच करोड चिसापानीमा मानव कंगाल भेटियो सुगमले तताय, गोपालले रुवाए सुदूरपश्चिममा आज ‘विषु पर्व’ मनाइँदै कृत्रिम गर्वाधानका लागि कालिकोटका गाई सुर्खेतमा	Home Interviews जानकी सिंह संगको कुराकानि जानकी सिंह संगको कुराकानि
Author : Kankrebihar Daily, Date : 24 Jul 2012
सुर्खेत जिल्लाको राजनीतिक क्षेत्रमा चिरपरिचित महिलाहरुमध्ये एक हुन् जानकी सिंह । घर व्यवहार सँगसँगै राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाएकी सिंह नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यसमते रहिसकेकी सिंह हाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य भएर राजनीतिमा सक्रिय छिन् । प्रस्तुत छ, सिंहसँग सुनिता पन्तले गरेको कुराकानी ।
+ दिनहरु कसरी बितिरहेका छन् ?
– पहिलेदेखि नै राजनीति गर्थे । राजनीति गरेरै वितिरहेको छ ।
+ राजनीति गर्ने प्रेरणाचाहिं कहांबाट पाउनुभयो ?
– पञ्चायतकाल देखिनै बुबाले बहुदलबादी भएर राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । जसका कारण बुबा धेरै चोटी जेल पनि पर्नु भएको थियो । मैले आफ्नो बुबाको प्रेरणा र महिलाको पीडाले गर्दा पनि मैले राजनीति गर्ने प्रेरणा प्राप्त गरे ।
+ सक्रियरुपले राजनीति कहिलेदेखि गर्नुभयो ?
– मैले विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति गर्थे । सक्रिय रुपले चाहिं २०४६ साल देखि गरें ।
+ सुर्खेत जिल्लाको राजनीतिक अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
–अन्य जिल्लाको तुलनामा त यहा“ धेरै राम्रो छ । विकास निर्माणका सवालमा होस् या अन्य सवालमा क्षेत्रीय सदुरमुकाम भएको कारणले पनि विभिन्न दलहरुबीच एकता भइरहेको छ । सुर्खेतमा कांग्रेसको संगठन नमूनाको रुपमा रहेको छ ।
+ राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको कस्तो अवस्था देख्नुभएको छ ?
– एकदमै गाह्रो छ । किनभने थुप्रै कुराहरु चुनँैतीपूर्ण छन् । घरमा, समाजमा र पार्टी भित्र पनि चुनँैतीहरु छन् । सबै पार्टीमा सामाजिक संरचनालाई पर्दाफास गर्न धेरै कठिनाई छ ।
+ पिछडिएका महिलाहरुलाई राजनीतिमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
–अहिले त महिला सञ्जाल गठन भएको छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरुबाट त्यस्ता महिलालाई राजनीतिमा ल्याउनका लागि थुप्रै कामहरु भएका छन् । महिलाहरुको साझा सवालको निम्ति सबै महिलाहरु एकजुट हुने वातावरण हामीले बनाएका छौं । त्यसैले वडा तहका महिलाहरुले राजनीतिमा पहिलाको तुलनामा अहिले बढी चासो देखाएका छन् ।
+ राजनीतिक क्षेत्रबाट विशेष के उपलब्धी पाउनुभयो ?
– थुप्रै उपलब्धीहरु हासिल गरें । शुरु शुरुमा राजनीति गर्दाखेरी थुप्रै सवालहरु सम्बोधन भयो । स्थानीय स्तरमा बजेट पनि छुट्यायो । जिविसमा महिलाहरुको समिति गठन भएको छ । दलित, जानजाति, नितान्त पछाडि परेका व्यक्तिहरुलाई माथि उठाउन राज्यले सम्बोधन गरेको छ ।
+ तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने राजनीतिज्ञ को हो नि ?
– मलाई गणेशमान सिंह र मंगलादेवी सिंहको विचारहरु मन पर्छ । उहा“हरुले आफ्नो सम्पत्ति सकेर भएपनि निःस्वार्थरुपले राजनीति गर्नुभयो । उहा“हरु थुप्रै त्याग तपस्या गर्ने नेताहरुमध्ये पर्नुहुन्छ ।
+ तपाई यहां सम्म आईपुग्नको लागि कत्तिको संघर्ष गर्नुभयो ?
– संघर्ष त थुप्रै गरें । पुरुषहरु मस“ग बोल्न चाहानु हुन्थेन । आफन्त र छिमेकीहरुले राजनीति गरी भनेर रिस गर्थे । मैले वडा अध्यक्ष्ँमा जित्दा धेरै पुरुषहरुले वडा अध्यक्ष्ँज्यूलाई कसरी नमस्कार गर्ने भन्ने सवाल उठाउनुभएको थियो । त्यसकारण मैले आफै सबैलाई नमस्कार गर्थे ।अहिलेचाही यस्तो अवस्था छैन । यस्ता संघर्षहरु मैले थुप्रै गरें ।
+ पार्टीमा कत्तिको सक्रिय भएर लागेको छु जस्तो लाग्छ ?
– विगत २०/२५ वर्षदेखि पार्टीमा निरन्तर लागिरहेको छु । उपलब्धीहरु पनि धेरै भए । पार्टीले मलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यसम्म र महिला संघको केन्द्रीय सदस्यसम्म पुर्याएको छ । पार्टीको सिपाहीकारुपमा पनि निरन्तर लागिरहेको छु ।
+ (प्रसंग बदलौं), तपाईको बाल्याकाल कसरी वित्यो नि ?
– एकदमै रमाईलोसग वित्यो । मेरो बुबाले मलाई छोरा सरह व्यवहार गरेर हुर्काउनुभयो । खान लाउन हरेक कुरामा मलाई यो छोरा हो भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो र मलाई एकदमै हौसला प्रदान गर्नुहुन्थ्यो ।
+ तपाईको विवाह कसरी भयो नि ?
– विवाह परम्परागतरुपमा २०४३ साल लाटीकोइलीमा भरतप्रताप सिंह मागेर भएको थियो ।
+ श्रीमान र श्रीमतीबीच कत्तिको झगडा हुन्छ नि ?
– मेरो श्रीमान् बुझ्ने मान्छे भएका कारण कुनैपनि कुरामा झगडा हुंदैन ।
+ तपाईको दुःखद् घटना छ कि ?
– मेरो बुबा बहुदलवादी हुनुहुन्थ्यो । बहुदल नआउंदै २०४५ सालमा बुबाको निधन भयो । देशमा बहुदल आएको हेर्ने बुबाको एकदमै इच्छा थियो ।
+ तपाईलाई परिवारको कत्तिको सहयोग छ ?
– शुरुमा अलिकति गाह्रो भयो । अहिलेचाहि एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ ।
+ पहिलो चोटी आमा बन्दा कस्तो महसुस भयो ?
– युवतीको जीवन र आमा भएको जीवन धेरै नै फरक लाग्यो । आफू आमा बन्न पाएकोमा एकदमै खुशी लाग्यो । पहिलो बच्चा छोरी भएको कारण पनि मलाई एकदमै खुशी लागेको थियो ।
+ दुःख पर्दा कत्तिको रुनुहुन्छ ?
– दुःख पर्दा म कहिलेपनि रुन्न । एकदमै साहसी भएर काम गर्ने गर्छु ।
‌‍‌+ गीत संगीत कत्तिको सुन्नुहुन्छ ?
– बढीजस्तो महिलाहरुको समाचार सुन्छु । समय मिलेसम्म गीत संगीत पनि सुन्ने गर्छु ।
+ अन्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ की ?
– महिलाहरु विभिन्न चुनौतीको बाबजुदपनि अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्णायक तहसम्म महिलाको पहुंच नभएसम्म महिलामुक्ती हुंदैन । राजनीतिदेखि लिएर शिक्षालगायत हरेक कुरामा महिलाहरु अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहान्छु ।
दुर्गममै बसेर सेवा - डा. रीता भण्डारी - 17 Dec 2012गाउनका लागि - स्मृती शाही - 17 Dec 2012जानकी सिंह संगको कुराकानि - 24 Jul 2012सुमिना घिमिरे सङ्गको कुराकानि - 25 Apr 2012 +View more